Grammarကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လေ့လာကြမယ် - For her Myanmar
Grammarကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လေ့လာကြမယ်
Grammar ဆိုတာနဲ့ တွန့်နေပြီလေ။ သင်ဖို့ အရမ်းပျင်းကြတာမလား။
ငယ်ငယ်က မှတ်မိသေးတယ် အင်္ဂလိပ်သင်တန်းတွေ တက်တုန်းကပေါ့။ listening လုပ်ရင် ကက်ဆက်ဖွင့်ပြတာလေးတွေ၊ Speaking ဆိုရင် သူငယ်ချင်းနဲ့ အပြန်အလှန် ပြောရတာလေးတွေ၊ Writing ဆိုရင် ဘယ်သူများများရေးနိုင်လဲ ပြိုင်ကြတာလေးတွေ၊ Reading အတွက် ပုံပြင်ဖတ်ခိုင်းတာမျိုးတွေပေါ့။ အဲ Grammar အချိန်ကျတော့ တွန့်ပြီလေ။ အပျင်းရောဂါ စွဲကပ်ချိန်ရောက်ပြီ။ ဘာ activities မှ မရှိဘဲ ဒီတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နားထောင်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်လိုက်နဲ့ပဲ ပြီးလာတာကိုး။ အဲ့တော့ ငယ်ငယ်က ပျင်းပျင်းနဲ့ Grammar မကျေခဲ့သမျှ ကြီးတော့မှ တိုင်ပတ်ပါလေရော။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်လေ့လာရရော။ ကဲ ဒီတော့ အက်မင် Grammar ပိုင်အောင် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ကြည့်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာလေး မျှဝေပေးမယ်နော်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဝါစင်္က (၈) မျိုးကနေ စလေ့လာပါ။ Parts of Speech တွေအကြောင်း အက်မင် မျှဝေပေးပြီးပါပြီ။ ဒါတွေကို အခြေခံအဆင့်အနေနဲ့ နားလည်ထားနိုင်ပြီဆိုရင် ချက်ချင်း စာကြောင်းမတည်ဆောက်နိုင်သေးရင်တောင် ရှိပြီးသား စာကြောင်းတွေကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တာမို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ သဒ္ဒါရဲ့ ပထမဆုံးအဆင့်ကလည်း parts of speech ဖြစ်တာကြောင့် ဒီအဆင့်ကို သေချာမကျေထားရင် နောက်ပိုင်းတော်တော်အခက်တွေ့ရမှာပါ။
Related article >>> ဝါစင်္ဂ (၈)မျိုးရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဘာကြောင့် အရေးကြီးရတာလဲ?
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ စာကြောင်းတွေကို လေ့လာကြည့်တာပါပဲ။ စာလုံးအသစ်အဆန်းတွေ သိထားတာက ကောင်းပါတယ်။ အဲ့စာလုံးတွေကို စာကြောင်းတွေအဖြစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်တာက ပိုလှသွားတာပေါ့။ စာကြောင်းဆိုလို့ အဆင့်ကျော်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ဦး။
အခြေခံစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ Subject+ Verb+ Object/ Compliment ပဲပါတာကြောင့် အရမ်းရိုးစင်းပါတယ်နော်။ Compliment ဆိုတာကတော့ နေရာပြ၊ အချိန်ပြ စတာတွေကို ခေါ်တာပါ။ အချို့စာကြောင်းတွေဆို Subject+ Verb နဲ့တင်ပြည့်စုံပါတယ်။ အဲ့ Verb တစ်မျိုးတည်းနဲ့ sentence ဖြစ်နေတာတောင် ရှိသေး။ ဥပမာ – Run! Watch out! Stop! စတာတွေပေါ့။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံရင် sentence ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ တစ်လုံးတည်းနဲ့ လည်း ဖြစ်တာပဲလေ။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ စကားစုတွေကို လေ့လာပါ။ ဒီအဆင့်ကတော့ နည်းးနည်းပျော်စရာ ကောင်းလာပါပြီ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရုံ မဟုတ်တော့ဘူး။ Phrase ဆိုတာ သူတို့ဘာသာ ရပ်တည်လို့မရတဲ့ (အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံတဲ့) စကားအစုတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ဘာသာပြန်ရပါတယ်။
ကြိယာစကားလုံးတွဲ၊ နာမဝိသေသန စကားလုံးတွဲ၊ နေရာပြ အချိနပြ စကားလုံးတွဲ၊ နာမ်စုတွဲ စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင် She must have jumped across the stream (သူစမ်းချောင်းလေးကိုဖြတ်ပြီး ခုန်ကူးသွားတာဖြစ်မယ်) ဆိုတဲ့ ဝါကျမှာ Must have jumped ဆိုတာက တစ်လုံးချင်းစီအဓိပ္ပါယ်ရှိပြီးသား စာလုံးတွေပါ။
ဒါပေမဲ့ ဝါကျကို အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင် ပြန်ဖို့ဆိုရင် အတွဲလိုက်ဘာသာပြန်မှ ရပါတယ်။ ကြိယာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် ဒါကို ကြိယာ စကားစုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Across the stream ဆိုတဲ့ Phrase မှာလည်း တစ်ခုချင်းဆိုရင် ဆိုလိုချင်တဲ့ နေရာပြပုဒ်ကို မရတဲ့အတွက် အတွဲလိုက်မှပဲ ပြည့်စုံမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒါကို နေရာပြ စကားစုလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Related article >>> အွန်လိုင်းသုံးပြီး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြမယ်
ပြီးရင်တော့ Clause လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွဲတွေကို ဆက်လေ့လာပါ။ Clause မှာ subject ရော Verb ရောပါတာကြောင့် သီးခြားရပ်တည်နိုင်တဲ့ sentence လို့လည်း သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့သော clause တွေကတော့ သီးခြားမရပ်တည်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်မရပ်တည်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က Phrase ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ တူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – Marie takesabath before she sleeps ဆိုတဲ့ sentence မှာ Marie takesabath က ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ Clause ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသွားလို့ပါ။ နောက်က တစ်ပိုင်းမပါလည်း ရပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ before she sleeps ကတော့ သီးခြား ရပ်မတည်နိုင်တဲ့ clause ပါ။ ဘာလို့ဆို အဲ့လောက်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးလေ။ ဆက်ပေးတဲ့ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကြောင်းလိုနေပါသေးတယ်။ Clause နှစ်မျိုးလုံးကို ကြည့်ရင် Subject ရော Verb ပါပါနေတာတွေ့ရမှာပါ။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ တော်ရုံရှုပ်ထွေးတဲ့စာကြောင်းလောက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် နားလည်နိုင်လောက်ပြီ ထင်တယ်နော်။ ယောင်းတို့ရော ကိုယ့်ဟာကိုယ် Grammar လေ့လာဖြစ်ကြလား။ ဘယ်နည်းတွေနဲ့ လေ့လာဖြစ်လဲဆိုတာ မျှဝေပေးခဲ့ပါဦး။
Grammar ဆိုတာနဲ့ တှနျ့နပွေီလေ။ သငျဖို့ အရမျးပငျြးကွတာမလား။
ငယျငယျက မှတျမိသေးတယျ အင်ျဂလိပျသငျတနျးတှေ တကျတုနျးကပေါ့။ listening လုပျရငျ ကကျဆကျဖှငျ့ပွတာလေးတှေ၊ Speaking ဆိုရငျ သူငယျခငျြးနဲ့ အပွနျအလှနျ ပွောရတာလေးတှေ၊ Writing ဆိုရငျ ဘယျသူမြားမြားရေးနိုငျလဲ ပွိုငျကွတာလေးတှေ၊ Reading အတှကျ ပုံပွငျဖတျခိုငျးတာမြိုးတှပေေါ့။ အဲ Grammar အခြိနျကတြော့ တှနျ့ပွီလေ။ အပငျြးရောဂါ စှဲကပျခြိနျရောကျပွီ။ ဘာ activities မှ မရှိဘဲ ဒီတိုငျး ငုတျတုတျထိုငျနားထောငျလိုကျ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျလိုကျနဲ့ပဲ ပွီးလာတာကိုး။ အဲ့တော့ ငယျငယျက ပငျြးပငျြးနဲ့ Grammar မကခြေဲ့သမြှ ကွီးတော့မှ တိုငျပတျပါလရေော။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျပွနျလလေ့ာရရော။ ကဲ ဒီတော့ အကျမငျ Grammar ပိုငျအောငျ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ ဘယျလို လကေ့ငျြ့ကွညျ့ရငျအဆငျပွနေိုငျမလဲဆိုတာလေး မြှဝပေေးမယျနျော။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဝါစင်ျက (၈) မြိုးကနေ စလလေ့ာပါ။ Parts of Speech တှအေကွောငျး အကျမငျ မြှဝပေေးပွီးပါပွီ။ ဒါတှကေို အခွခေံအဆငျ့အနနေဲ့ နားလညျထားနိုငျပွီဆိုရငျ ခကျြခငျြး စာကွောငျးမတညျဆောကျနိုငျသေးရငျတောငျ ရှိပွီးသား စာကွောငျးတှကေို ခှဲခွားစိတျဖွာနိုငျတာမို့ အဆငျပွမှောပါ။ သဒ်ဒါရဲ့ ပထမဆုံးအဆငျ့ကလညျး parts of speech ဖွဈတာကွောငျ့ ဒီအဆငျ့ကို သခြောမကထြေားရငျ နောကျပိုငျးတျောတျောအခကျတှရေ့မှာပါ။
Related article >>> ဝါစင်ျဂ (၈)မြိုးရဲ့ ကဏ်ဍဟာ အင်ျဂလိပျစာမှာ ဘာကွောငျ့ အရေးကွီးရတာလဲ?
ဒုတိယအဆငျ့ကတော့ စာကွောငျးတှကေို လလေ့ာကွညျ့တာပါပဲ။ စာလုံးအသဈအဆနျးတှေ သိထားတာက ကောငျးပါတယျ။ အဲ့စာလုံးတှကေို စာကွောငျးတှအေဖွဈ ဖှဲ့စညျးလိုကျတာက ပိုလှသှားတာပေါ့။ စာကွောငျးဆိုလို့ အဆငျ့ကြျောတယျလို့ မထငျပါနဲ့ဦး။
အခွခေံစာကွောငျးတဈကွောငျးမှာ Subject+ Verb+ Object/ Compliment ပဲပါတာကွောငျ့ အရမျးရိုးစငျးပါတယျနျော။ Compliment ဆိုတာကတော့ နရောပွ၊ အခြိနျပွ စတာတှကေို ချေါတာပါ။ အခြို့စာကွောငျးတှဆေို Subject+ Verb နဲ့တငျပွညျ့စုံပါတယျ။ အဲ့ Verb တဈမြိုးတညျးနဲ့ sentence ဖွဈနတောတောငျ ရှိသေး။ ဥပမာ – Run! Watch out! Stop! စတာတှပေေါ့။ အဓိပ်ပာယျပွညျ့စုံရငျ sentence ဖွဈတယျဆိုတော့ တဈလုံးတညျးနဲ့ လညျး ဖွဈတာပဲလေ။
နောကျတဈဆငျ့ကတော့ စကားစုတှကေို လလေ့ာပါ။ ဒီအဆငျ့ကတော့ နညျးးနညျးပြျောစရာ ကောငျးလာပါပွီ။ ခှဲခွမျးစိတျဖွာရုံ မဟုတျတော့ဘူး။ Phrase ဆိုတာ သူတို့ဘာသာ ရပျတညျလို့မရတဲ့ (အဓိပ်ပာယျမပွညျ့စုံတဲ့) စကားအစုတှပေါ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ကို တဈပေါငျးတဈစညျးတညျး ဘာသာပွနျရပါတယျ။
ကွိယာစကားလုံးတှဲ၊ နာမဝိသသေန စကားလုံးတှဲ၊ နရောပွ အခြိနပွ စကားလုံးတှဲ၊ နာမျစုတှဲ စသညျဖွငျ့အမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ ဥပမာပွရမယျဆိုရငျ She must have jumped across the stream (သူစမျးခြောငျးလေးကိုဖွတျပွီး ခုနျကူးသှားတာဖွဈမယျ) ဆိုတဲ့ ဝါကမြှာ Must have jumped ဆိုတာက တဈလုံးခငျြးစီအဓိပ်ပါယျရှိပွီးသား စာလုံးတှပေါ။
ဒါပမေဲ့ ဝါကကြို အဓိပ်ပာယျရှိအောငျ ပွနျဖို့ဆိုရငျ အတှဲလိုကျဘာသာပွနျမှ ရပါတယျ။ ကွိယာတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ ဒါကို ကွိယာ စကားစုလို့ ချေါပါတယျ။ Across the stream ဆိုတဲ့ Phrase မှာလညျး တဈခုခငျြးဆိုရငျ ဆိုလိုခငျြတဲ့ နရောပွပုဒျကို မရတဲ့အတှကျ အတှဲလိုကျမှပဲ ပွညျ့စုံမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒါကို နရောပွ စကားစုလို့ ချေါပါတယျ။
Related article >>> အှနျလိုငျးသုံးပွီး အင်ျဂလိပျစာ သငျကွမယျ
ပွီးရငျတော့ Clause လို့ချေါတဲ့ သူ့ကိုယျပိုငျရပျတညျနိုငျတဲ့ စကားလုံးတှဲတှကေို ဆကျလလေ့ာပါ။ Clause မှာ subject ရော Verb ရောပါတာကွောငျ့ သီးခွားရပျတညျနိုငျတဲ့ sentence လို့လညျး သတျမှတျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခြို့သော clause တှကေတော့ သီးခွားမရပျတညျနိုငျပါဘူး။ ကိုယျပိုငျမရပျတညျနိုငျတဲ့ စကားလုံးတှရေဲ့ လုပျဆောငျခကျြက Phrase ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြနဲ့ တူနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ – Marie takesabath before she sleeps ဆိုတဲ့ sentence မှာ Marie takesabath က ကိုယျပိုငျရပျတညျနိုငျတဲ့ Clause ဖွဈပါတယျ။ အဓိပ်ပာယျပွညျ့စုံသှားလို့ပါ။ နောကျက တဈပိုငျးမပါလညျး ရပျလိုကျလို့ရပါတယျ။ before she sleeps ကတော့ သီးခွား ရပျမတညျနိုငျတဲ့ clause ပါ။ ဘာလို့ဆို အဲ့လောကျနဲ့ အဓိပ်ပာယျမပွညျ့စုံဘူးလေ။ ဆကျပေးတဲ့ စာကွောငျးတဈကွောငျးကွောငျးလိုနပေါသေးတယျ။ Clause နှဈမြိုးလုံးကို ကွညျ့ရငျ Subject ရော Verb ပါပါနတောတှရေ့မှာပါ။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျတော့ တျောရုံရှုပျထှေးတဲ့စာကွောငျးလောကျကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွီး ရေးနိုငျ ဖတျနိုငျ နားလညျနိုငျလောကျပွီ ထငျတယျနျော။ ယောငျးတို့ရော ကိုယျ့ဟာကိုယျ Grammar လလေ့ာဖွဈကွလား။ ဘယျနညျးတှနေဲ့ လလေ့ာဖွဈလဲဆိုတာ မြှဝပေေးခဲ့ပါဦး။
Tags: English, Knowledge, language
Myat Moe February 22, 2019